यी १० प्राकृतिक चिजहरु अपनाएर आफ्नो सेक्स् पावरलाई बढावा दिनुहोस ! | पहिलो बोली
यी १० प्राकृतिक चिजहरु अपनाएर आफ्नो सेक्स् पावरलाई बढावा दिनुहोस !
तपाईंको यौन जीवनको मसला खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईको दैनिक जीवनमा गर्न सक्ने विभिन्न प्रकारका चीजहरू छन् जुन तपाईंको कामेच्छालाई बढावा दिन र तपाईंको सेक्सन जीवन बढाउन मद्दत गर्दछ।
१. केहि फलहरू खाएर हेर्नुहोस्
थोरै प्रमाणले केही खाद्य पदार्थहरूको प्रभावकारितालाई समर्थन गर्दछ, तर त्यहाँ प्रयोगमा कुनै हानी छैन।
उदाहरणका लागि अन्जीर, केरा, र एभोकाडोलाई कामवासन गर्ने खाद्य पदार्थ मानिन्छ, जसलाई कामोद्दीपक भनिन्छ।
तर यी खाद्य पदार्थहरूले महत्त्वपूर्ण भिटामिन र खनिजहरू पनि प्रदान गर्दछ जसले जननांगहरूमा रगत प्रवाह बढाउन र स्वस्थ यौन जीवनलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ।
२. चकलेट खाने कोशिस गर्नुहोस्
इतिहास भर मा, चकलेट इच्छा को प्रतीक भएको छ। यो केवल यसको स्वादिष्ट स्वादको कारणले होइन, तर यौन खुशीलाई सुधार गर्ने यसको शक्तिको कारणले हो।
एउटा अध्ययनका अनुसार, चकलेटले तपाईंको शरीरमा फेनिलेथिलेमाइन र सेरोटोनिनको रिलीजलाई बढावा दिन्छ। यसले केहि कामोत्पादक र मुड-लिफ्टि प्रभावहरू उत्पादन गर्न सक्दछ।
अर्को अध्ययनका अनुसार, सेक्सुएलिटीमा चकलेटको प्रभाव जैविक भन्दा बढी मनोवैज्ञानिक हुन सक्छ।
३.तपाईको दैनिक आहार लिनुहोस्
अर्को पटक तपाईं रोमान्टिक डिनरमा बस्न निर्णय गर्नुहोस्, तपाईंको थालमा एक सानो तुलसी वा लसुन थप्नुहोस्। तुलसीको गन्धले इन्द्रियहरूलाई उत्तेजित गर्दछ। लसुनमा एलिसिनको उच्च स्तर हुन्छ, र रगत प्रवाह बढाउँछ।
यी प्रभावहरूले इरेक्टाइल डिसफंक्शनका साथ पुरुषहरूलाई मद्दत गर्दछ।
जिन्कगो बिलोबा ट्रस्टेड स्रोत, चिनियाँ जिन्कगो रूखको पातबाट निकालेको अर्क, जडिबुटी एन्टिप्रेसप्रेसन्ट-प्रेरित यौन रोगको उपचार गर्न पाइन्छ।
४ .Africa. अफ्रिकाबाट टिप लिनुहोस्
पश्चिमी अफ्रिकी सदाबहारको बोक्रामा फेला परेको एउटा अल्कोलोइड योहिम्बाइन प्राकृतिक भियग्राको रूपमा काम गर्ने भनेर चिनिन्छ।
केही अध्ययनहरूले सुझाव दिन्छ कि योहिमबाइन बार्कले तपाईंलाई ईरेक्शन कायम गर्न मद्दत गर्दछ। यसले इरेक्शनको गुणस्तर पनि बढाउछ। यद्यपि अनुसन्धानकर्ताहरूले भने कि भियाग्रासँग मेल खाने कुनै प्राकृतिक बराबर छैन।
५ .तपाईको आत्मविश्वास बढाउनुहोस्
तपाईंको शरीरको बारेमा तपाईंले महसुस गर्ने तरीकाले तपाईंले यौनको बारेमा महसुस गर्ने तरिकालाई असर गर्छ। एक अस्वस्थ आहार र व्यायाम को अभावले तपाइँलाई एक गरीब आत्म-छविको मानिस बनाउन सक्छ। यी चीजहरूले सेक्स गर्न र रमाईलो गर्न तपाईंलाई निरुत्साहित गर्न सक्छन्।
तपाईं आफ्ना गुणहरूमा फोकस गरेर तपाईंको आत्मसम्मान र तपाईंको सेक्स ड्राइभलाई बढावा दिन सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि सेक्स को समयमा खुशी अनी कामवासनामा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ।